ထမင်းအိုး: MALWARE ကင်းရှင်းသွားပါကြောင်း
မိုးကောင်းသူလေးလဲ အမေ့အိမ်ပြန်ပြီး ဟင်းအသစ်မတင်ဖြစ်ဘူး။ ပျင်းပျင်းနဲ့ နေပစေအုံးဆိုပြီး ထမင်းအိုးကို ဒီအတိုင်း ပစ်ထားလိုက်တယ်။ ဒီနေ့မှ စိတ်ကူးပေါက်ပေါက်နဲ့ အမေ့အိမ်က စားခဲ့တဲ့ဟင်းလေး တင်အုံးမှဆိုပြီး ဘလော့ဝင်လိုက်ပါတယ်။ မိုးကောင်းသူရဲ့ ထမင်းအိုး မှိုတက်နေရုံတင်မကဘဲ ၀ဲစားနေပါတယ်ဆိုပြီး စာတန်းတွေ့ရပါတယ်။ မိုးကောင်းသူတို့များ ကိုယ့်ထမင်းအိုး ၀ဲစား၊ ၀ဲကိုက် နေမှန်းမသိဘူး။ ဒီတော့မှ ဟိုဘလော့လဲ ၀ဲကိုက်တယ် ဒီဘလော့လဲ ၀ဲကိုက်တယ်နဲ့ ဟိုးလေးတစ်ကြော်ကြော်ဖြစ်နေတယ်။ မိုးကောင်းသူ အဖြစ်ကလဲ ဂလို ဂလို။ ဒါနဲ့ ဒီဝဲတော့ရှင်းအုံးမှ ဆိုပြီး ၀ဲရှင်းလင်းရေးစခန်း လုပ်ရပါတော့တယ်။ ၀ဲရှင်းလေးရေးလုပ်တာ အတော်လေးကြာသွားတယ်။ ဒီနေ့ ဟင်းတော့ အသစ်မတင်နိုင်တော့ဘူးကွယ်။ ပိတ်ရက်မှ အမေ့အိမ်က စားခဲ့သမျှဟင်းအသစ် တင်ပါတော့မယ်။
Posted by မိုးကောင်းသူ at 10:46 PM
I have just linked your blog before you announced this. I hope you don't mind linking your blog. I really enjoy reading your blog. I was wondering where you have gone. Thanks.